Sistemụ mkpado ọnụahịa ESL nha: 2.9”
N'ihi na anyị Ọnụ ego ESLdị nnọọ iche na ngwaahịa ndị ọzọ, anyị anaghị ahapụ ozi ngwaahịa niile na webụsaịtị anyị ka ị ghara iṅomi. Biko kpọtụrụ ndị ọrụ ahịa anyị na ha ga-ezitere gị ozi zuru ezu.
Kedu ka mkpado ESL si arụ ọrụ?
A zuru ezu ESL mkpado Sistemu nwere akụkụ anọ: PC bụ isi, ihuenyo EPD, ESL mkpado na smart handheld ngwa ngwa.
ESL mkpado Nke mbụ, ozi ngwa ahịa dị na nchekwa data bụ nke kọmpụta onye nnabata na-etinye koodu site na nke ESL mkpadongwa ngwa ngwa, na mgbe ahụ ọnụahịa na ozi ndị ọzọ kwesịrị imelite na-ebufe na exciter site na Ethernet (ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri serial); ihe na-akpali akpali na-ebugharị mpi akaghị aka ibunye mgbama redio RF nwere ozi data ngwaahịa na ụlọ ahịa niile.
Nke ESL mkpado Sistemu nwere ọrụ nzikọrịta ozi abụọ: isi-na-isi na izipu otu, ya bụ: kọmpụta onye ọbịa nwere ike ibunye data na otu akọwapụtara. ESL mkpado, ma ọ bụ niile ESL mkpado ozugbo weghara. ESL mkpado aN'ezie webatara shelf n'ime mmemme kọmputa nke ọma, wepụ ọnọdụ nke iji aka gbanwee mkpado ọnụahịa, yana nweta nkwekọ ọnụ n'etiti akwụkwọ ndekọ ego na shelf.
Nke ọ bụla ESL mkpado na-echekwa ọtụtụ ozi gbasara ngwaahịa kwekọrọ, onye na-ere ahịa nwere ike ịlele ngwa ngwa site n'enyemaka nke ngwa ọdụ ọdụ smart smart.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ mkpado ọnụahịa ESL?
1. Ọnụ ego ESL bụ nnọọ ntụkwasị obi
Automation management automation, akpaaka nlekota oru na usoro ịdọ aka ná ntị mbụ, ezigbo arụmọrụ akwụkwọ eletrọnịkị, nnyefe data ezoro ezo, ndụ batrị karịa afọ 5
2.Ọnụ ego ESL dị nnọọ adaba
Mgbanwe ọnụahịa otu-pịa, nkwalite sọftụwia sistemu dịpụrụ adịpụ, Usoro ESL akpaka okirikiri, ịmaliteghachi akpaka mgbe ike dara, nrụnye dị mfe na ịrụ ọrụ dị mfe.
3. Ọnụ ego ESL ọrụ mgbanwe
Na-akwado ntụgharị ihuenyo ọtụtụ, ndebiri mkpado ọnụahịa ahaziri iche, zute ọtụtụ gburugburu asụsụ, dakọtara na nyiwe ọnụ ọnụ ọtụtụ, ngwa bara ụba, imeghari n'ọtụtụ ọnọdụ.
N'ime ngwa bara uru: Ọnụ ego ESLna-arụ ọrụ nke nnyefe ozi na onye na-ebufe mmekọrịta n'ime ụlọ ahịa ahụ, soro ndị na-azụ ahịa na-emekọrịta ihe, ndị na-enyere aka ụlọ ahịa, na isi ụlọ ọrụ n'ọtụtụ akụkụ iji meziwanye ahụmịhe nke ndị ahịa, kwalite usoro ọrụ, ma ghọta ọrụ na nhazi nhazi. Ụlọ ahịa nwekwara ike jikọọ online na offline site naỌnụ ego ESL, na-enyere ụlọ ahịa anụ ahụ aka ịmepụta, nakọta, nyochaa ma rụọ ọrụ data omume ndị ahịa, ma nye ntọala data maka ndị na-ere ahịa iji nweta ahịa ahịa nke ọma karị. Tụnyere usoro ịzụ ahịa ọdịnala dị ka nkewa nke ịntanetị na offline, otu ụzọ, kọntaktị ndị dịpụrụ adịpụ, ebe akụrụngwa na-edoghị anya, yana ihe isi ike na nsuso nsonaazụ ahịa ikpeazụ, enwere ike nweta ahịa nkenke n'ụzọ dị mfe site na ijikọ ngwa nke ihuenyo ụlọ shelf.Ọnụ ego ESL. A na-enyocha usoro ahụ dum, njikwa oge, iji bulie mmetụta ahịa ahịa.
Ngosipụta agba Nwa, ọcha, odo
Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ 0 ~ 50 ℃
Okpomọkụ nchekwa -10 ~ 60 ℃
Ndụ batrị Afọ ise
Anyị nwere ọtụtụ Ọnụ ego ESL n'ihi na ị na-ahọrọ na, e nwere mgbe ọ bụla nke dabara gị! Ugbu a ị nwere ike ịhapụ ozi bara uru gị site na igbe mkparịta ụka dị na akuku aka nri ala, anyị ga-akpọtụrụ gị n'ime awa 24.
FAQ nke usoro mkpado ọnụahịa ESL
1.Na mgbakwunye na mkpado ọnụahịa ESL 2.9 inch, ị nwere nha ndị ọzọ nke mkpado ọnụahịa ESL?
Dị ka onye na-eweta mkpado ọnụahịa ESL, anyị na-agbalị ike anyị niile iji gboo mkpa nke ọtụtụ ndị ahịa ma nye mkpado ọnụahịa ESL nke nha dị iche iche, site na 1.54 inch ruo 11.6 inch ma ọ bụ ọbụna karịa.
2.Can anyị nwere ike ịzụta batrị ejiri na mkpado ọnụahịa ESL site na nnukwu ụlọ ahịa? Ma ọ bụ batrị pụrụ iche?
A na-ere batrị Cr2450 na ụlọ ahịa izugbe, ma ọ bụrụ na a na-eji ya eme ihe, enwere ike iji batrị dị na mkpado ọnụahịa ESL anyị ruo ọtụtụ afọ ma ọ bụ karịa.
3.I'm a small supermarket nwe. Kedu ihe m kwesịrị ịzụrụ iji sistemụ mkpado ọnụahịa e ink gị?
N'akụkụ ngwaike, e ink price mkpado nke dị iche iche nha na-ahọrọ dị iche iche commodities. N'ime usoro nrụnye, a chọrọ ngwa dị iche iche iji wụnye mkpado ọnụahịa e ink, mgbe ahụ, achọrọ ọdụ ọdụ iji nyefee data. Achọrọ PDA iji tinye ngwa ahịa.
N'akụkụ ngwanrọ, anyị nwere sọftụwia ịntanetị na otu ụlọ ahịa ngwa ahịa maka ịhọrọ.
Nzọụkwụ na-esote bụ ntinye nke mkpado ọnụahịa E Ink na ntinye nke ngwanrọ. Anyị nwere ntuziaka zuru ezu na ndị injinia ga-eduzi gị ka ịwụnye na jikọọ ngwanro ahụ.
4. Kedu ụdị enyemaka ị ga-enye site na ijikọ mkpado ọnụahịa ink na sistemụ POS anyị?
Protocol / API / SDK bụ mkpa ka jikọọ na ESL ọnụ ahịa mkpado ka nke gị Sistemụ POS, anyị ga nye ndị a na nyere onye injinia gị aka n'oge ọ bụla n'oge njikọta, ọ bụrụ na ịchọrọ ka anyị nyere aka ihu na ihu, anyị ga-achọkwa ime ya.
5. Ị ga-enye n'efu sample maka ule?
Ọ dabere, Anyị nwere ọtụtụ ọnọdụ dị iche iche iji nye ihe atụ n'efu, biko kpọtụrụ anyị maka nkọwa ndị ọzọ.
6. Enwere m ụlọ ahịa iri anọ. Enwere m ike iji otu ngwa ngwa jikwaa ngwa ahịa ndị an'ime ụlọ ahịa m?
N'ezie, nke a bụ otu n'ime ọrụ nke ngwaahịa anyị. Ngwanrọ dị n'ịntanetị anyị ga-ejikọta ụlọ ahịa 40 gị ọnụ, ma ị nwere ike
jikwaa ụlọ ahịa ndị a iche iche. Akụrụngwa nwere ọtụtụ ọrụ. Anyị ejikọtala ọtụtụ ọrụ dị ka ịchọrọ n'ime ngwanro ahụ. Ekwenyere m mgbe ijiri mkpado ọnụahịa ESL anyị, njikwa gị nke ụlọ ahịa ndị a ga-adaba adaba na ngwa ngwa.
7. Nwere ike ị na-ebipụta ma ọ bụ tinye akara nke Logo anyị na mkpado ọnụahịa ESL?
Ee, a na-enye ọrụ ahụ.
MRB ESL akara ngosi vidiyo HL290
Nke gara aga: MRB eletrọnịkị mkpado HL213F maka nri oyi kpọnwụrụ
Osote: MRB na mkpado ink ọnụ ahịa HL420
mkpado shelf eletrọnịkị
Ndị na-emepụta mkpado ọnụahịa ESL
Ndị na-eweta mkpado ọnụahịa ESL
Sistemụ mkpado ọnụahịa ESL
Ọnụ ego ESL
Sistemụ mkpado ESL
Sistemụ akara akara MRB ESL HL750